युवा संस्थाहरू आक्रामकताको बारे अलार्म बजाउँछन् किनकि 'हेरचाह' वास्तवमा दुरुपयोग हो? : मार्टिन Vrijland
युवा संस्थाहरू आक्रामकताको बारे अलार्म बजाउँछन् किनभने 'हेरचाह' वास्तवमा दुरुपयोग हो?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 नोभेम्बर 2019 मा	• 11 टिप्पणिहरु
मन्त्री Sander Dekker (तपाईं ती न्यायाधीशहरुलाई चिन्नुहुन्छ, जसले सबैलाई आदर्श ज्वाइँको रूपमा देख्न सक्दछ, तर जो भेडाको लुगामा एक ब्वाँसो हो) स्तब्ध छ भन्छन् युवा हेरचाहमा घटनाहरूको गहनताका कारण। ठिक छ, Sander, किनभने त्यो हो कि जर्ज ओर्वेलले पहिले नै आफ्नो पुस्तक 1984 मा केहि व्याख्या गरेका थिए newsworthy छ त्यो पुस्तकमा यो वर्णन गरिएको छ कि 'केयर' जस्ता शब्दहरूले वास्तवमा दुरुपयोग र त्यस प्रकारको त्रासको बढी गर्दछ। मैले पहिल्यै देखेको छु कि मेरो लुकेको क्यामेरा रेकर्डि withको साथ 2013 मा "युवा हेरचाह" सेटिंगमा (तल भिडियो हेर्नुहोस्)। Heerhugowaard मा संस्थाको निर्देशकलाई यी रेकर्डिंगको परिणामका कारण हटाइयो र नियमहरू थोरै समायोजित गरियो, तर पक्कै पनि त्यो मुख्यतया भविष्यमा स्काउट्सलाई अझ स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले गरिएको थियो।
त्यो भिडियोले त्यस्ता संस्थानहरूको त्रासको बारेमा केही अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। मैले यो रेकर्डि made गरेको हो जब मेरो साथीको छोरी यस्तो संस्थामा अन्त भयो। किनभने उनलाई ज्वरो आएको थियो, हामी असाधारण भर्ना भएका थियौं र म लुकेको क्यामेराको साथ फिल्म बनाउन सक्छु एउटा टेलिफोनमा तस्करी भएको, जुन म उनको ओछ्यानमा गद्देमा लुकाइराखेको थिएँ, उनी आफ्नो छिमेकी (संस्थाका कर्मचारीहरू) द्वारा दुर्व्यवहारको आवाज रेकर्ड गर्न सक्षम भएकी छिन्। तपाईंले भिडियोको अन्त्यमा त्यो सुन्नुहुनेछ। भिडियोको पहिलो भागमा उनले रिपोर्ट गरिन् कि उनले ढोका बाहिर गर्नु भएको हरेक गतिविधि रिपोर्ट गर्नु थियो। शुद्ध किशोरीहरूको लागि जोसँग उनीहरूको निधारमा केही गम्भीर छैन, तर केवल किशोरावस्थाको गाह्रो समय वा घरको स्थिति छ। र पक्कै पनि यो केवल एक स्न्यापशट र घुम्टोको टिप थियो। यस संस्थानका (केवल) धेरै भूतपूर्व निवासीहरूले मलाई भनेको कथाहरू केवल यस संसारबाट बाहिर छन्! शुद्ध भयानक र कसैले पनि यसलाई देख्दैन! सफा बगैंचा र सफा भवनहरू, तर यसको भित्र पृथ्वीमा नरक छ।
विगतमा तपाईंलाई सामान्य किशोरावस्थामा जान अनुमति दिइयो; आजकल तपाइँ एक अलग सेलमा लक हुनुहुन्छ। यदि तपाइँको आमा बुबा आमा घर मा लक, तिनीहरूले दुर्व्यवहार को शीर्षक प्राप्त गर्नेछन्; यदि एक युवा हेरचाह कार्यकर्ताले तपाईंलाई "दुखाइ उत्तेजना" दिन्छ (पढ्नुहोस्: एक अर्कामा थप्पड) वा पृथक कक्षमा फ्लिकरहरू, त्यो शैक्षिक र "आवश्यक" छ। के यो अचानक राम्रो छ? हामी कहाँ अन्त्य भयो !?
यी युवा हेरचाहकर्मीहरूको विवेक एक धितो वा भाडा तिर्नको लागि सीमान्तकृत देखिन्छ र उनीहरूको आफ्नै नाइकेको नाइकेको। यो दृढ देखिन्छ कि नियमित तर लगातार तलबले अन्तस्करणलाई शान्त बनाउँछ। औसत युवा हेरचाहकर्मीको विवेकले सम्भवतः 'बेफेल इस्ट बेफेल' अवधारणालाई पूरा गर्दछ। अब तपाइँ त्यो मुड बनाउने फेला पार्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमै विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन कुराको लागि साँचो हृदय छन्। माफ गर्नुहोस्, तर यो सम्भवतः केहि लागि छैन कि त्यहाँ युवा हेरचाहकर्मी बिरूद्ध धेरै हिंसा छ। मैले धेरै प्राप्त गरेको छु (रिकभरी: मेरो मतलब धेरै नै) युवा देखभालको बारेमा गुनासोहरू। उल्लेख गर्न धेरै धेरै! त्यस सन्दर्भमा, मैले ती सबै गुनासोहरूलाई व्यक्तिगत ध्यान दिन कुहुराहरूमा फाल्नु पर्यो। यो केवल धेरै धेरै र भावनात्मक तनावपूर्ण पनि छ!
मेरो विचारमा, युवा देखभाल कुनै चासोको विषय होइन। हामी डरलाग्दो पुन: शिक्षा शिविरहरूको अवलोकन गरिरहेका छौं जहाँ प्रत्येक मानवतालाई बेवास्ता गरिन्छ। ठिक छैन, हामी यसलाई गवाही दिइरहेका छैनौं किनकि हामी यसलाई देख्दैनौं। यो चिपकाइ मा हुन्छ; बन्द ढोका र सफा बगैंचा पछाडि। जटिल किशोरकिशोरीहरूलाई लक गर्नु जसको घर ठीकठाक छैन र तथाकथित "पीडा उत्तेजनाहरू" चलाइरहेको छ, अलगाव कोशिकामा लक सहित, मध्यकालीन भन्दा खराब नै हो। त्यसोभए उसको मन्त्रीले उसको सफा र सही चश्मा र सूट लगाएर ऊ "चकित" छ भन्न सक्थ्यो, तर मेरो लागि भेडाको कपडामा ब्वाँसो बाहेक अरु केही छैन जसले 'बेहे' भन्छ। त्यो सम्पूर्ण युवा हेरचाह संस्थाहरूको सर्किट हो जसले "सेवाहरू" र पैसा पम्पिंगबाट धेरै पैसा कमाउँछ को पछाडि निर्दोष कमजोर बच्चाहरू। यो एक साँचो उद्योग भएको छ!
म भन्छु: तपाईं Sander Dekker एक राम्रो सेलमा एक दिन बिताउनु भयो (किनभने त्यहाँ त्यस्तो "संस्था" मा पिन कोड लकको साथ कोठा छैन) त्यस्ता युवा "हेरचाह" संस्थानमा। एक्लोसन सेलमा सुन्नको लागि अवलोकनका लागि राम्रो हात वा घाँटी क्ल्याम्प राख्नुहोस् (पढ्नुहोस्: थकित र पूरै निराश भुइँमा पिरोलिएको)। त्यसोभए हामी तपाईंलाई फेरि टाईको सुन्दर सूटमा हेर्न चाहन्छौं। हेर्नुहोस् यदि तपाईं अझै च्याट छ कि छैन।
तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ: के यो अचम्मको कुरा छ कि युवा "हेरचाह" काम गर्ने कर्मचारीहरू विरूद्ध बढ्दो हिंसा उत्पन्न हुन्छ वा यो अनौठो हो कि यी कर्मचारीहरूले आफ्नो अन्तस्करणलाई झन् झन् बढी हराइरहेका छन्? नेदरल्याण्ड्स, के त्यहाँ के भएको छ जहाँ सबैले एक अर्काको हात समातेर दुराचारलाई प्रमाणित गर्न र असामान्यतालाई सामान्यतामा उचाल्दैछन्? अन्तस्करण फेरि प्राप्त गर्न र त्यस्तो त्रासलाई अन्त्य गर्न कोसँग हिम्मत छ? को ओहो? (टिप्पणीहरूमा भिडियो पनि हेर्नुहोस्)
स्रोत लिङ्क सूची: nu.nl
आफ्नो बच्चाहरु लाई मार्नुस् र तपाई केवल2वर्षहरू जस्तै Yasmine एम को बयानमा आज प्राप्त गर्नुहुन्छ
अधिक र अधिक मानिसहरू राज्यको लागि काम गर्दै छन्, त्यसैले राज्यको आलोचना निराश हुन्छ
ट्याग: वितरण, डिकर, विशेष, Heerhugowaard, युवा संस्था, युवा हेरविचार, minister, आपतकालीन घंटी, Sander, स्वास्थ्य संस्था
4 नोभेम्बर 2019 मा 05: 26
4 नोभेम्बर 2019 मा 06: 35
सेयर शेयर शेयर शेयर !!
कृपया ध्यान दिनुहोस्: फेसबुकले यस सन्देशलाई ब्यक्तिहरूको टाइमलाइनमा ब्लक गर्न गइरहेको छ किनकि उनीहरूले यसलाई "महत्वहीन" (राज्य सेन्सरशिप पढ्ने) फेला पारे, त्यसैले व्यक्तिगत मेल, व्हाट्सएप वा जे भए पनि साझेदारी गर्नुहोस्!
सबैभन्दा खराब कुरा के हो भने अधिकांश व्यक्तिहरू जसले लेखहरू साझा गर्न साहस राख्दैनन् ... डरको लागि कि अरूले तिनीहरूको हाँसो उडाउनेछ बरु लाज बुसर्स आफैलाई लाजमा पर्नु पर्छ भन्ने महसुस गर्नुको सट्टा।
4 नोभेम्बर 2019 मा 06: 54
हामी बारम्बार देख्छौं कि अन्याय विरुद्ध कथित रूपमा स fight्घर्ष गर्ने सरकारहरूले कसरी यस्तै प्रकारको ठूलो अन्याय गर्दछन्। भनिन्छ, मित्रराष्ट्रहरूले नाजीहरूलाई निष्कासन गरेका थिए तर विन्स्टन चर्चिलले युद्ध सकिएको बेला ड्रेस्डेनलाई बम विस्फोट गरिरहेका थिए। नाजीहरूले कुनै चीजको लागि मान्छेहरूलाई मार्दैनन्, तर "मुक्तिदाताहरूले" ठीक त्यस्तै गरे। कसले वास्तवमा एडोल्फ हिटलरलाई आर्थिक सहयोग गर्दथ्यो भन्ने कुराको सवालबाहेक (के त्यो सियोनवादी पैसा अमेरिकाबाट आउँदैन थियो?): के नाजिज्मको अस्तित्व कहिल्यै रह्यो? वा एडोल्फ हिटलरको दृश्यबाट बेपत्ता हुनु भनेको नयाँ मिठो प्रजातान्त्रिक ज्याकेटमा फासीवादको पुनर्निर्माणको थालनी हो?
भाग्यवस हामीसँग छविहरू अझै छन् .. यो युद्ध पछि कसरी गयो (हेर्नुहोस् "befehl ist befehl शट्स" सम्बद्ध "उद्धारकर्ता" को शटहरु)।
सोभियत पुन: शिक्षा शिविरहरू अब गुलागको रूपमा चिनिदैनन् र नाजी यातना शिविरहरू अब ती असहज उपस्थितिहरू छैनन्। आजकल यसलाई GGZ क्लिनिक वा युवा हेरचाह संस्था भनिन्छ। हामी थोरै परिष्कृत भएका छौं र सबैलाई अस्वाभाविक नयाँ टेल ज्याकेटमा राख्छौं, जसले गर्दा अन्तस्करणले कोही पनि चिन्तित हुँदैन। अगाडिको ढोका सफा र बगैचा सफा र सेल ढोकामा राम्रो सजावट र एक पिन लक छ।
4 नोभेम्बर 2019 मा 06: 59
4 नोभेम्बर 2019 मा 07: 07
मृत्युको संख्या आधिकारिक रूपमा 25 हजार थियो, तर त्यो चर्चिलको अवधारणामा आधारित छ "इतिहास बिजेताद्वारा लेखिएको छ"
वास्तवमा हामी यस बम विष्फोट पछि सयौं हजारदेखि दश लाखको मृत्युको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। यद्यपि यो निश्चित रूपमा फेरि दावी गरिएको छ कि यो नव-नाजीहरू हो जसले त्यस्ता नम्बरहरू कल गर्छन्। विजेताले इतिहास पुस्तिकाहरू पुन: लेख्छन् (र निस्सन्देह यो गुलाब बाहिर आउँछ)।
यो फस्फोरस बम वर्षाको विशाल छालहरूको एउटा ठूलो उत्तराधिकार थियो र त्यसपछि ठूलो आगलागीले जिउँदो सबैलाई मेटायो। नोट: युद्ध सकियो!
4 नोभेम्बर 2019 मा 07: 27
म किन माथी पोष्ट गर्दछु?
यो देखाउनको लागि कि हामी अझै एउटा गलत शासनको अधीनमा छौं; एउटा सरकारले मानिसहरूलाई बन्दी बनाउँछ र तिनीहरूलाई शिविरमा राख्छ। ती शिविरहरू केवल थोरै सुन्दर देखिन्छन्, हेरचाह संस्थाको शीर्षक छ र कर्मचारीहरूको सफा तलब, सफा वोक्सवैगन र राम्ररी रेक्ड बगैंचा छ।
कर्मचारीहरूको अन्तस्करणलाई पारिश्रमिक र पार्टीहरू वा कफी मेसिनमा कथाहरू साझा गरेर तलबबाट हटाइन्छ।
4 नोभेम्बर 2019 मा 07: 58
ग्राप्पेमेकरसँग यसको लागि स्वाद छ Wiersum साइप पछि
र जहाँसम्म ड्रेस्डेनको सवाल छ ... राम्रो संदिग्ध संदिग्धहरू तपाईं यसलाई बाट उम्कन सक्नुहुन्न
4 नोभेम्बर 2019 मा 16: 05
4 नोभेम्बर 2019 मा 18: 43
4 नोभेम्बर 2019 मा 19: 10
4 नोभेम्बर 2019 मा 07: 50
हो, यो सत्य हो कि हामी शान्त, सूक्ष्म तानाशाहीमा बाँचिरहेका छौं। समय परिवर्तन जति सक्दो चाँडो त्यसपछि जनसंख्या अन्ततः उनीहरूको स्वतन्त्र देशमा बस्न सक्दछन् यदि उनीहरूसँग उनीहरूको मुख्य पदहरू छैन जुन उनीहरूसँग धेरै लामो समय देखि धेरै लामो समयसम्म रहन्छन्।
« नासाद्वारा फोटो खिचेको ब्ल्याक होल वास्तवमा प्लाज्मा प्लाज्मिड हो
नयाँ मार्टिन भ्रिजल्याण्ड पुस्तक 'वास्तविकता जसरी हामीले बुझ्यौं' डेलिभरीका लागि तयार छ! »
कुल भ्रमण: 13.972.827